Bit By Bit - Ny fandinihana ny fitondran-tena - 2.4.2 Forecasting sy nowcasting
1.4.1 Readymades sy Custommades
1.4.2 Tsotra ny pitsiny
1.4.3 Mifehy na aiza na aiza
1.5 Outline ao amin'ny boky
2.3 Common toetra ny tahirin-kevitra lehibe
2.3.1 Toetra mampiavaka ankapobeny izay tsara ho an'ny fikarohana
2.3.2 Toetra mampiavaka izay amin'ny ankapobeny ratsy ho an'ny fikarohana
2.3.2.1 tsy feno
2.3.2.2 tsy azo nidirana
2.3.2.5 Algorithmically mangaihay
2.4.1.2 Namana fiofanana eo amin'ny mpianatra
2.4.1.3 Sivana ny haino aman-jery sosialy avy amin'ny governemanta Shinoa
2.4.3.1 Natural fanandramana
3.2 Ny fametrahana vs. mijery
3.4.1 mety santionany: fanangonana antontan'isa sy ny tahirin-kevitra fanadihadiana
3.4.2 Non-mety santionany: weighting
3.4.3 Non-mety santionany: santionany mifandraika
3.6 fanadihadiana mifandray amin'ny hafa rakitra
3.6.1 Malagasy manontany
3.6.2 nampanan-karena nanontany hoe
4.5.1 fotsiny manao izany ny tenanao
4.5.1.1 Ampiasao misy tontolo
4.5.1.2 Manaova fanandramana anao manokana
4.5.1.3 Manaova anao manokana vokatra
4.5.2 mpiara-miombon'antoka amin'ny ny matanjaka
4.6.2 Manolo, hanadiovana, ary Ahena
5 Lamesa fiaraha-miasa
6.2.2 Andramo, karavato ary Time
7.1 Mitady foward
7.2 Themes 'ny ho avy
7.2.1 Ny mampifangaro ny Readymades sy Custommades
Maminavina ny hoavy no sarotra, fa mialoha ny ankehitriny dia mora kokoa.
Ny faharoa lehibe paikady ampiasain'ny mpikaroka miaraka amin'ny angon-drakitra observational no forecasting. Maminavina ny hoavy no nalaza sarotra, nefa afaka ny ho mampino zava-dehibe ho mpanapa-kevitra, na miasa amin'ny orinasa na fitondram-panjakana.
Kleinberg et al. (2015) dia manolotra tantara roa izay manazava ny maha zava-dehibe ny forecasting ho an'ny olana politika sasany. Eritrereto hoe mpanao politika iray, miantso azy aho Anna, izay miatrika ny hain-tany ary tsy maintsy manapa-kevitra raha ny manakarama mpanasitrana hanao ny orana dihy mba hampitombo ny vintana ny orana. Iray hafa mpanao politika, niantso azy aho Bob, dia tsy maintsy manapa-kevitra raha handray elo hiasa mba tsy lena eny an-dalana an-trano. Samy Anna sy Bob afaka manao fanapahan-kevitra tsara kokoa, raha izy ireo hahatakatra ny toetr'andro, nefa mila mahafantatra ny zavatra hafa. Anna Mila mahatakatra na ny orana dihy mahatonga orana. Bob, etsy an-danin'izany, dia tsy mila na inona na inona momba ny anton'ny fahatakarana; izy fotsiny forecast mila marina tsara. Mpikaroka ara-tsosialy matetika mifantoka amin'ny zavatra Kleinberg et al. (2015) miantso "orana dihy-tahaka ny" olana politika-ireo izay mifantoka amin'ny anton'ny-ary tsy miraharaha "elo-toy ny" olana politika izay mifantoka amin'ny forecasting.
Te-hifantoka, na izany aza, eo amin'ny karazana forecasting manokana antsoina hoe nowcasting -a teny homarinana avy amin'ny natambatra "izao" sy ny "forecasting." Tsy mialoha ny hoavy, nowcasting miezaka milaza ny ankehitriny (Choi and Varian 2012) . Amin'ny teny hafa, nowcasting mampiasa fomba forecasting ho an'ny olana ny fandrefesana. Araka izany, dia tokony ho tena ilaina ny fanjakana, izay mitaky fepetra ara-potoana sy marina momba ny firenena. Nowcasting Azo oharina amin'ny fomba tena mazava amin'ny ohatra ny Google Trends gripa.
Eritrereto hoe ianao no mahatsapa kely eo ambanin'ny toetr'andro mba type "gripa fanafody" ho fikarohana, mandray ny pejy ny rohy Ho valin'izany, ary avy eo dia manaraka ny iray tamin'izy ireo mba Manampy pejy web. Ary sary an-tsaina io asa io rehefa nilalao avy amin'ny fomba fijery araka ny fikarohana. Isaky ny fotoana, ny fanontaniana an-tapitrisany no tonga avy amin'izao tontolo izao, ary io renirano fanontaniana-zavatra Battelle (2006) no antsoina hoe ny "banky angona ny fikasany" - dia manome nohavaozina foana varavarankely ho any amin'ny fikambanana maneran-fahatsiarovan-tena. Na izany aza, mamadika izany renirano vaovao ho fandrefesana ny fielezan'ny ny gripa dia sarotra. Fotsiny fanisana ny isan'ny fanontaniana ny "gripa fanafody" tsy mety miasa tsara. Tsy izay rehetra manana ny gripa gripa mitady fanafody fa tsy ny olona rehetra izay searchers ny gripa fanafody manana ny gripa.
Ny zava-dehibe sy ny fitaka feno hafetsena ao ambadiky ny Google Trends gripa dia mba hiverina ny fandrefesana olana ho forecasting olana. Ny US Foibe Miady Amin'ny Aretina (CDC) dia manana rafitra fanaraha-maso ny gripa izay manangona ireo vaovao avy amin'ny mpitsabo manerana ny firenena. Na izany aza, iray olana ity rafitra CDC dia misy roa herinandro tatitra haingana toy; ny fotoana mitaky ho an'ny angon-drakitra tonga avy amin'ny dokotera mba ho nanadio, tsinjaraina, ary navoaka. Fa, rehefa manazava ny mipongatra areti-mifindra, ny fahasalamam-bahoaka birao tsy te-hahafantatra ny fomba gripa be dia nisy tapa-bolana lasa izay; dia te-hahafantatra ny fomba gripa be misy amin'izao fotoana izao. Raha ny marina, maro nentim-paharazana hafa loharanom-tahirin-kevitra ara-tsosialy, misy banga eo amin'ny onja ny fanangonana antontan'isa sy ny tatitra lags. Angon-drakitra lehibe indrindra loharanom-baovao, amin'ny lafiny iray hafa, dia foana-on (sampana 2.3.1.2).
Noho izany, Jeremy Ginsberg sy ny mpiara-miasa aminy (2009) nanandrana mialoha ny CDC gripa angona avy amin'ny Google fikarohana tahirin-kevitra. Izany dia ohatra iray amin'ny "mialoha ny ankehitriny", satria ny mpikaroka nitady handrefesana tena gripa misy ho avy izao amin'ny alalan'ny mialoha angona avy amin'ny CDC, hoavy akora izay nandrefesany ny ankehitriny. Mampiasa milina ny fianarana, dia nandinika 50 tapitrisa isan-karazany teny fikarohana mba hahita izay tena vinavina ny CDC gripa angona. Tamin 'ny farany, dia nahita 45 samihafa napetraka ny fanontaniana izay toa ka tena vinavina, ary ny vokany dia tena tsara: afaka mampiasa ny fikarohana tahirin-kevitra milaza ny CDC angona. Miorina amin'ny ampahany amin'ny taratasy ity, izay navoaka tao amin'ny Nature, Google Trends gripa lasa iray miverimberina matetika fahombiazana tantara momba ny herin 'ny tahirin-kevitra lehibe.
Misy zava-dehibe roa ny fampitandremana aorina ho toa izany fahombiazana, na izany aza, sy mahafantatra ny fampitandremana aorina ireo dia hanampy anao handinika sy hanao forecasting sy nowcasting. Voalohany, ny fanatanterahana ny Google Trends gripa raha ny marina dia tsy mihoatra lavitra noho ny tsotra modely izay tombanany ny habetsaky ny gripa mifototra amin'ny Linear extrapolation avy amin'ny roa farany indrindra fandrefesana ny gripa tahan'ny (Goel et al. 2010) . Ary, ny fotoana gripa fotoana Google Trends dia tena ratsy kokoa noho io fomba tsotra (Lazer et al. 2014) . Amin'ny teny hafa, Google Trends rehetra gripa ny angon-drakitra, milina ny fianarana, sy ny mahery dia tsy be computing outperform tsotra sy mora azo heuristic. Izany dia toa manondro fa rehefa misy forecast fanombanana na nowcast dia zava-dehibe ny mampitaha manohitra ny fototra.
Ny zava-dehibe faharoa fampitandremana momba ny Google Trends gripa dia ny fahaizany manambara ny CDC gripa antontan-kevitra dia mora ny fohy ezaka tsy fahombiazana ary maharitra simba noho ny mandresy sy ny algorithmic mampifangaro. Ohatra, nandritra ny 2009 gripan-kisoa valan'aretina Google gripa Trends be eo-tombanana ny habetsaky ny gripa, angamba noho ny olona maro hanova ny fikarohana fihetsika ho setrin'ny hatraiza hatraiza ny tahotra ny Global areti-mifindra (Cook et al. 2011; Olson et al. 2013) . Ankoatra ireo olana ao anatin'ny fotoana fohy, ny fampisehoana simba tsikelikely rehefa mandeha ny fotoana. Hamantarana ny antony izany mandritra ny fotoana maharitra simba dia sarotra, satria ny Google fikarohana algorithms dia format manan-tompo, nefa hita fa tamin'ny 2011 Google nanao fiovana izay soso-kevitra mifandray amin'ny fikarohana teny rehefa hitady soritr'aretina toy ny "tazo" sy ny "kohaka" (izany koa toa fa ity endri-javatra tsy miasa intsony). Manampy izany endri-javatra dia mitombina tanteraka zavatra tokony hatao raha mihazakazaka ny mili raharaham-barotra, ary nisy ny vokatry ny hiteraka bebe kokoa mikasika ny fikarohana ara-pahasalamana. Izany angamba ny fahombiazana ho an'ny raharaham-barotra, fa nahatonga Google Trends gripa mahery-tombana gripa tahan'ny (Lazer et al. 2014) .
Soa ihany fa ireo olana miaraka amin'ny Google Trends dia fixable gripa. Raha ny marina, mampiasa fomba tsara kokoa, Lazer et al. (2014) sy Yang, Santillana, and Kou (2015) dia afaka mahazo vokatra tsara kokoa. Nony nandroso, manantena aho fa izay mitambatra nowcasting fampianarana lehibe amin'ny mpikaroka nanangona angon-drakitra data-izay mitambatra Duchamp fomba Readymades amin'ny Michaelangelo fomba Custommades-dia hahafahan'ny mpanao politika mba hamokatra haingana kokoa sy marina kokoa ny fandrefesana ny ankehitriny sy ny ho avy mialoha avy.